LHRH-A2 for Bovines duritaanka & Doofaarka - Shiinaha Ningbo Second Hormone
Farabadan oo Hormone Sii daynta Hormone A2 Durayo (LHRH-A2) Corporation Tani waa soo saaraha kaliya isagoo maray shahaado GMP guriga marka la eego qalabka sida xawliga ah u farabadan oo Hormone Sii daynta hormoonnada A2. [Description] wax soo saarka Tani waa blocks debcinta-qalajiyey caddaan ama budo. [Function iyo isticmaalka] daroogada hormone Polypeptide. Waxaa kor u qaadi kartaa pituitary jilibka xayawaanka in ay qarsan farabadan (LH) iyo follicle hormone-madadaalo (FSH), ku dheehan maturity ee kiishashka ugxansiduhu ...
L uteinizing H ormone R eleasing H ormone A 2 Durayo (LHRH-A 2 )
Tani Corporation waa soo saaraha kaliya isagoo maray shahaado GMP guriga in terms of the raw materials for Luteinizing H ormone R eleasing H ormone s A 2.
daroogada hormone Polypeptide. Waxaa kor u qaadi kartaa pituitary jilibka xayawaanka in ay qarsan farabadan (LH) iyo follicle hormone-madadaalo (FSH), ku dheehan maturity ee kiishashka ugxansiduhu waa dalacsiiyay ovulate. Waxaa inta badan loo isticmaalaa in lagu daaweeyo hysteresis ugxan, ugxan aan firfircoonayn, yirahdo gulkroppshormon joogto ah iyo fiix ukun-side for lo'da caanaha. Waxaa kor u qaadi kartaa spermatogenesis xayawaanka lab.
Mid ka mid ah dose for duridda:
Per lo'da caanaha:
hysteresis 1. ugxan: duridda of 25-50μg halka bacrin la fuliyo.
2. ugxan-qabad la'aan: 25μg, hal mar maalintii, waxa loo isticmaali karaa muddo 3 maalmood oo isku xiga, iyo qiyaasta guud ee ma noqon doono in ka badan 75μg; guud ahaan, saamaynta fiican u noqon doonaa oo keliya marka ay jirto follicle kasta horumariyo ugxansiduhu.
3. Fiixda Ukun-sidaha: 25μg, hal mar maalintii, waxaa loo isticmaali karaa 3-4 maalmood oo isku xiga, iyo qiyaasta guud ee ma noqon doono in ka badan 100μg.
Hagaajinta size qashin: duridda of 25μg inta lagu guda jiro weheshiga
Per oo ido ah:
Heerka Hagaajinta uurka lagu daray size qashin iyo xoojinta saamaynta super-ugxan: 15-25μg.
Previous: Gonadotropin Durayo (GnRH)
Next: LHRH-A3 for Bovines duritaanka & Doofaarka
Lhrh-A2 Waayo Bovines duritaanka & Doofaarka